ह्यारिसन पेंटरको लेखहरूमा Martech Zone |
द्वारा लेखहरू ह्यारिसन पेन्टर
ह्यारिसनको VP को व्यवसाय विकासको लागि DK New Media। उहाँ एक सीरियल उद्यमी र रचनात्मक मार्केटर हुनुहुन्छ जसले आफ्ना दुई मार्केटिंग कम्पनीहरू प्राप्त गर्नुभएको छ, एउटा निजी र सार्वजनिक रूपमा। ह्यारिसन एक अनुभवी वीडियोग्राफर र निर्देशक पनि हो, जुन विशेषज्ञतालाई हाम्रो अन्य प्रीमियम सामग्री सेवाहरूको साथ गुनामा ल्याउँदछ। उसको उत्कट सम्बन्ध सम्बन्ध निर्माण गर्ने र रचनात्मक साझेदारी खोज्ने बारेमा हो जुन सहयोग, नवीनता, र बजार अवरोधको शक्तिमा केन्द्रित हुन्छ।
इमर्सिभ मार्केटि,, पत्रकारिता र शिक्षाको आगमन
बुधबार, मार्च 8, 2017 ह्यारिसन पेन्टर
भर्चुअल र संवर्धित वास्तविकता तपाईंको भविष्यमा ठूलो भूमिका खेल्ने छ। टेकक्रन्चले भविष्यवाणी गर्दछ कि मोबाइल एआर प्रायः years बर्ष भित्रमा $ १० बिलियन बजार हुनेछ! तपाईं एक अत्याधुनिक प्रविधि कम्पनी को लागी काम गर्दैन, वा एक शोरूम अफिस फर्नीचर बेच्न मा केही फरक पर्दैन, तपाइँको व्यवसाय लाई एक इमर्सिभ मार्केटि experience अनुभव द्वारा एक तरीका बाट फाइदा हुन्छ। VR र AR बीच के फरक छ? भर्चुअल रियलिटी (VR) को एक डिजिटल मनोरन्जन हो
With कारण भिडियोको साथ मार्केटि R पहुँच विस्तार गर्ने
सोमबार, डिसेम्बर 5, 2016 आइतवार, जनवरी २,, २०१। ह्यारिसन पेन्टर
भिडियो तपाईंको शस्त्रागारको मार्केटिंग पहुँच विस्तार गर्नको लागि सबैभन्दा शक्तिशाली मार्केटिंग उपकरणहरू मध्ये एक हो, यद्यपि यसलाई प्राय: बेवास्ता गरिन्छ, कम प्रयोग गरिन्छ र / वा गलतफहमी गरिन्छ। त्यहाँ कुनै प्रश्न छैन कि भिडियो सामग्री उत्पादन डरलाग्दो छ। उपकरण महंगा हुन सक्छ; सम्पादन प्रक्रिया समय खपत, र क्यामेराको अगाडि विश्वास खोज्ने सधैं सजिलो हुँदैन। धन्यबाद हामीसँग आज यी चुनौतिहरू पार गर्न मद्दत गर्न धेरै विकल्पहरू छन्। सबैभन्दा नयाँ स्मार्टफोनले KK भिडियो, सम्पादन सम्पादन गर्दछ